Global Voices teny Malagasy » Mpifaninana ho solontenan’ny mpiara-miombonantoka ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Mohamed ElGohary · Global Voices teny Malagasy » Print
Mpifaninana ho solontenan'ny mpiara-miombonantoka ao amin'ny filankevipitantanana GV 2020: Mohamed ElGohary
Voadika ny 02 Avrily 2020 4:29 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed ElGohary Nandika avylavitra
Sokajy: Blaogim-Piarahamonina GV, Filankevitra-GV-2020
Mohamed ElGohary. SARY: Sebastiaan ter Burg  tao amin'ny Flickr (CC BY 2.0 )
Mohamed ElGohary  dia manoritsoritra ny tenany ho toy ny ” GVer iray mitondra satroka maro, liana amin'ny fitantanana vondrompiarahamonina iray ao anaty tontolo misy kolontsaina marolafy, ny teknolojia, ny fiarovana nomerika ary izay rehetra mahakasika ny asa fandikàna.” Mipetraka ao Kairo, nanaraka fiofanana ho injeniera biômedikaly izy ary niasa tao anatin'ny sehatry ny fifandraisandavitra nandritra ny taona maromaro, avy eo niova asa nankany amin'ny indostrian'ny media sôsialy . Ny Jolay 2009, nanatevina laharana ny GV tamin'ny maha-mpandika lahatsoratra ho amin'ny teny Arabo. Tamin'ny 2011, izy no lasa Mpandrindra ny Lingua, ary ankehitriny dia Talen'ny Lingua. Niasa teo anivon'ny filankevipitantanan'ny GV i Gohary ny taona 2015 hatramin'ny 2017.
Ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho ao anatin'ny filankevipitantanana 2020 dia nasaina namaly ireo andiana fanontaniana vitsivitsy eto ambany. Aza misalasala mametraka fanontaniana fanampiny amin'i Gohary, atao ao anatin'ny toerana ho an'ny fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity!
Inona no tena manintona anao indrindra momba ny fidirana hiasa ao anatin'ny filankevipitantanan'ny GV?
Eny, Tiako ity vondrompiarahamonina ity. Ho ahy, ny fisiako ao anivon'ny filankevipitantanan'ny GV dia fisoloana tena ireo tombontsoa tsara indrindra ananan'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrompiarahamonina, ary izay indrindra no tena tiako hatao. Tiako ny ho isan'ny filankevitra iray mavitrika ao anatina tontolo iray faran'izay tena haingam-piova, na amin'ny endriny ivelany izany, na amin'ny endriny virtoaly. Katsahako ny hanome fahafahampo amin'ny fanjohiana GV iray tsara kokoa sy matanjaka kokoa.
Talenta, traikefa, fifandraisana, ary fahaizana manokana toa inona no ho atolotrao ny Global Voices amin'ny maha-solontenan'ireo mpiara-miombonantoka anao?
Efa iraikambinifolo taona aho izao no mpiaramiasa tamin'ny GV ary mpamaky azy talohan'izay. Efa indray mandeha niasa tao anivon'ny filankevipitantana ihany koa. Efa tany amin'ny 2005  tany raha ny traikefako amin'ny fitantanana ireo vondrompiarahamonina ety anaty aterineto. Tiako ny mihevitra ny hoe manana fifandraisana tsara ato anatin'ny Vondrompiarahamonina GV aho, ary hatramin'ireo namana, fikambanana sy tetikasa toy ny Creative Commons sy Wikipedia. Mpandinika aho no sady mpihaino. Manana satroka marobe, miainga avy amin'ny fikambanana (raha resaka traikefa), ny fahafehezana ny teknolojia ary ny fandraisana fanapahankevitra rehefa ilaina izany.
Raha mijery ny taona telo ho avy ianao, inona, araka ny hevitrao , no tokony ho laharampahamehana ho an'ny GV amin'ny maha-fikambanana azy?
Ny teboka matanjaky sy ny anjara asa ara-pandrindran'ny GV dia, ary efa izay foana, fitadiavana sy fanentsenana ny hantsana misy eo amin'izay atolotr'ireo fampahalalambaovao mahazatra sy ny tena tokony atolotr'izy ireny. Tiako ny manamarika mandrakariva hoe ny adihevitra tokony hisy amin'ny faramparan'ny andiantaona 2000 dia momba ny karazana fifandraisana misy amin'ireo bilaogera sy ny mpanao gazety, ary mbola mitohy any anaty faribolana sasantsasany any izany, ary ny valiny dia ny hoe fifandraisana mifameno io.
Satria niova ny fanoratana bilaogy, ary niova tsikelikely ny aterineto, avy amina toerana iray nanaovana fanapariahana sy manandratra ny fahalalahana, araka ny dikanteny tena izin'ilay teny mihitsy, mankany amina media iray mivangongo amina toerana iray sy fehezina vondron'orinasa manosika endrika iray, ary ny fanarahamaso tsy mitsahatra mitombo ataon'ny governemanta, ny anjara asan'ny GV amin'izao fotoana izao koa dia tokony ho fandrindrana ny hetsika mitodika mankany amin'ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto. Io dia toy ny hoe fomba fijery Advox  iray atodika sy afantoka amin-javatra voafaritra, saingy izaho mihevitra hoe izao tontolo izao dia mandalo krizin'ny fisiana, izay anovàn'ny governemanta ny aterineto ho lasa dika iray ratsy kokoa sy tsy refesimandidy amin'ny fiainana tena izy, ary tokony hanana andraikitra asa manohitra an'io ny GV.
Inona amin'ny endriky ny asan'ny GV no tena mahaliana anao indrindra?
Niditra GV tamin'ny maha-mpandika teny aho, mbola izay no fahalinana be ho ahy, fa koa nahaliana ahy daholo izay rehetra ataon'ny GV ! Zava-miavaka ho ahy mandrakariva ny zavatra ataon'ny GV !
Inona no tianao hotsoahana avy amin'io traikefa miasa ho an'ny filankevipitantanana io, na amin'ny resaka asa izany, na ho an'ny tena manokana?
Raha raisina ny hoe efa manjohy aho, tsy ho zavatra vaovao amiko io! Nahazo torohay sy fomba fijery tena manandanja be aho momba ny tokony ho fiasan'ny fikambanana virtoaly iray! Ahoana no fomba hiarahana miasa sy ny fandrafetana ireo pôlitika fampiroboroboana sy fiarovana vondrompiarahamonina virtoaly iray. Ho ahy ny traikefa tao amin'ny filankevipitantanana dia tsy hoe fotsiny zavatra atsofoka anatin'ny mombamomba ny tena (CV), nanitatra ny fisainako ilay izy ary nampahita ahy zavatra maro avy amin'izay niainan'ny hafa. Ny ampahany tena zavadehibe indrindra dia ny fanisahana ny drafitro ankapobeny niala tamin'ny paikady ho any amin'ny tetikady.
Ahoana no fomba hampivadianao ny asan'ny filankevipitantanana amin'ireo adidy aman'andraikitrao hafa, na ny manokana izany, na amin'ny asa?
Miasa amin'ny ora feno ho an'ny GV aho, ary ny ampahany amin'ny asa ataoko isanandro dia efa ampahany amin'ny asan'ny filankevipitantanana, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny vondrompiarahamonina.
Inona no fomba ho ampiasainao ho firotsahana sy hihainoanao ny vondrompiarahamonina mba hampahomby ilay fisoloana tena eny anivon'ny filankevipitantanana?
Andramako ny manaraka ireo adihevitra eny amin'izay toerana isehoany! Mifandray amin'ny alalan'ny fantsona marobe ireo GVers ary idirako daholo izay azoko idirana. Lisitra imailaka, tambajotra sosialy, ireo fandefasana hafatra malaky, hainareo ny anaran'izy ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/04/02/147585/
 Sebastiaan ter Burg: https://www.flickr.com/photos/ter-burg/47036844054/in/photosof-ircpresident/
 indostrian'ny media sôsialy: https://www.egyptindependent.com/
 Efa tany amin'ny 2005: https://web.archive.org/web/20050218013341/http://www.teenstuffonline.com:80/forum/